Inyanga epheleleyo kaDisemba: Ukutsalwa phakathi kweNkcubeko kunye neMinqweno enzulu - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Inyanga epheleleyo kaDisemba: Ukutsalwa phakathi kweNkcubeko kunye neMinqweno enzulu
Inyanga epheleleyo ngoDisemba eCancer iya kubeka ubudlelwane kwindawo ebonakalayo kwaye ikhokelele kwizigqibo ezithile. Fumanisa ukuba esi siganeko siza kuchaphazela njani uphawu lweenkwenkwezi.
NgoLwesithathu nge-30 kaDisemba, iNyanga eNgcwele yoMhlaza iya kusishukumisa kwaye isenokuvusa iingcinga ezifihliweyo. Esi siganeko senyanga siza kusibona sisondela kufutshane neentsapho zethu kunye nabahlobo, ngelixa sisikhuthaza ukuba sigxile kuseto lwasekhaya. Nangona kunjalo, kuya kuthi kwakhona kuthandabuze ubudlelwane bethu bothando kwaye kusinyanzele ukuba sizibuze ukuba ingaba sanelisekile ngenene okanye nokuba sinqwenela ukusondelelana kunye nokwabelana ngesondo. USusan Taylor utyhila indlela uphawu ngalunye lwe-zodiac oluya kuchaphazeleka ngayo kwesi siganeko senyanga.
Zithini iimpawu zeNyanga epheleleyo yoMhlaza?
Isichaphazela njani inyanga epheleleyo kaDisemba?
Uphawu lweenkwenkwezi lwenyanga yakho
-NgoDisemba 2020, iNyanga epheleleyo yenzeka ngoLwesithathu we-30 nge-10: 28 PM EST nge-08 ° 53 ukusuka kumqondiso weCancer-
imigca esentsingiselo yesandla
Le Nyanga ipheleleyo igxila ekuqwalaseleni amandla ayo kunye nokuqwalaselwa kwendalo yasekhaya, kunye nobomi bethu obusondeleyo. Ikhuthaza imisebenzi ekhaya kunye nosapho, ukusebenza kubudlelwane bethu kunye nokuzonwabisa kumaqela amancinci. Inyanga epheleleyo yoMhlaza ikumema ukuba uphinde ulinganise ubomi bakho bobuqu kunye nobungcali xa kukho imfuneko. It ichonga uxinzelelo kumacandelo ohlukeneyo obomi bakho kwaye ikukhuthaza ukuba uthathe izigqibo zokuzihlengahlengisa ukuze kungabikho la mabakala mabini obukhoyo atyeshelwayo.
Ngaba ujonge uthando lokwenene nolonwabo? Nxibelelana nengcali yePsychic ukuze ufumane ulwazi ngakumbi ngekamva lakho
Siza kuchaphazeleka njani ngeNyanga epheleleyo kaDisemba?
Ngexesha lenyanga epheleleyo kaDisemba, i Ilanga lidibene neMercury eCapricorn kwaye idityaniswe kakuhle neUranus eTaurus. Oluqwalaselo oluthile lweplanethi lwenza ukuba uqaphele, ukuzimela kwengqondo kunye nomnqweno wokuphila ngokukhululekileyo nokuba oko kuthetha ukothusa abantu abambalwa apha endleleni.
IVenus kwiSagittarius isikwere ukuya kwiNeptune kwiiPisces kwaye eli cala linako tyhala uye kulingo olutsha kuthando, nokuba zibonakala zinobuhlanga. Unokuqhekeka phakathi komnqweno wokuziyeka uhambe kunye noloyiko lokuphoxeka kunye nokuphulukana nolawulo lobomi bakho bangoku. Kukho ukungangqinelani apha phakathi kobutyebi, ukhuseleko, inkohliso kunye nokuzonwabisa. NjengeNyanga epheleleyo kukukhanya okukhokelayo, inokukuzisa iindaba okanye ingcaciso malunga nemeko yothando enengxaki.
Ngapha koko, inokukhokelela kwingxwabangxwaba kuba iMars kwibala leAries ukuya ePluto ikhulisa ubungqangi bakho kunye neminqweno. Oku kunokubangela ingxaki yangaphakathi kunye Uhlengahlengiso olunesaqhwithi ngokubhekisele kubomi bakho obusondeleyo kunokwenzeka. IJupiter kunye neSaturn zidityanisiwe kwi-Aquarius kodwa isikwere ukuya ku-Uranus, ukwandisa uxinzelelo lwakho lweemvakalelo. Ukrazukile phakathi komnqweno wokuqhubela phambili, isidingo 'sokubuyisela' ubukho bakho kunye noloyiko lokuba uqale ngokutsha.
Kuthetha ukuthini xa amazinyo akho ephupha
Nangona kunjalo, xa unikwe imiba yesibhakabhaka esipheleleyo seNyanga ngoLwesithathu wama-30 kuDisemba, unokuzithemba kakhulu kwaye kunokwenzeka ukuba uzakukhupha iinzipho zakho xa imeko engathandekiyo ikucaphukisa kwaye ngakumbi ukuba umntu uzama ukuthatha ithuba. ukuthembela kwakho!
Inyanga epheleleyo yehoroscope ngoDisemba; Ngubani oza kuchaphazeleka?
Wonke umntu ukhathazekile yiNyanga eNgcwele kodwa ezona mpawu zichaphazelekayo zodiacac ziya kuba njalo Umhlaza, iCapricorn, iiAries, iLibra kodwa kunye neScorpio, iPisces, iTaurus kunye neVirgo.
Nceda qaphela: Uyakube uziva ngakumbi kule Nyanga ipheleleyo ukuba uphawu lwakho oluphumayo okanye uphawu lweNyanga luwela kolunye lwale miqondiso.
Cofa kwiintolo ezingezantsi ukufumana i-horoscope yakho. Unokuthanda: Eyethu Ikhalenda yeNyanga epheleleyo yowama-2020 .
Esi siganeko senyanga siza tyhila iminqweno engcwatyelweyo okanye umsindo ilele nzulu ngaphakathi kwakho. Uyakufumana kunzima ukuyicinezela iminqweno yakho kwaye uhlengahlengiso losapho lunokwenzeka.
Taurus othandekayo, uya kuba ngumhlobo kunesiqhelo kwaye uya kukulungela ukumamela abanye abantu. Baninzi nawe Nika iprojekthi yokuchitha amandla kwaye uhambe kude neqela.
Ngaba i-777 ithetha nantoni na
Uyakhuthazeka ukuba ubonise iimali zakho kwaye kuya kufuneka wenze amanyathelo ayingozi phucula imeko yakho yezemali. Gcina intloko epholileyo!
Amandla enyanga akumema ukuba uye thatha isitokhwe kunye neqabane lakho lothando kunye nokuthetha ngeminqweno yakho kunye nemibono yakho. Ukuba awutshatanga, ekugqibeleni uza kuyifumana into oyifunayo kwiqabane.
Ukuba ulwalamano, uya kuthatha isigqibo sokuba nencoko enzulu kunye neqabane lakho malunga ikamva lakho lisingise phi. Ukuba awutshatanga, uya kunikezela kwinkanuko kwaye ekugqibeleni uyeke iinwele zakho.
Ubuchule bakho bokuyila buya kukhuthazeka kwaye uya kufumana ubugcisa obutsha ngaphakathi kwakho. Abantu bayabuxabisa ubuqu bakho, ke Musa ukoyika ukuphuma kwindlela ebethiweyo, ngakumbi kuba ayilulo uphawu lwentengiso lwesiqhelo!
Kutheni inombolo yesihlanu ibalulekile
Lixesha lokuba ubonakalise
Uya kujongana nokukhetha okunzima phakathi kweminqweno yakho kunye nobomi bosapho bakho. Kwelinye icala, uthando lunokubeka kwimeko yokudideka kwaye ingxaki inokuvela kulo mbandela ...
Ubutyebi bakho buza kukunceda Hlalutya imeko ethile yothando kwaye uthathe esona sigqibo sihle ngasemva kwayo. Xa kuziwa kusapho lwakho nakubantwana, kufuneka ufumane ukungqinelana kuba kufuneka uphefumle!
Sukuyeka ukuya phambili
Uya kukhuthazwa ukuba uphonononge iiakhawunti eziqhelekileyo kwaye ubeke irekhodi ngqo ukuba iqabane lakho okanye umntu omthandayo unempahla kunye nawe. Ngaphandle koko lixesha lokuba uphonononge ulawulo lwekhaya lakho.
Leliphi inani elingu-11
INyanga epheleleyo ikubizela ukuba uzinyanzele bucala kunye nabantu osebenza nabo. Kufuneka utsho ukuba ucinga ntoni kwaye usebenze ngokuzimeleyo ngokusebenza ngakumbi!
Yiba ngumntu omkhulu
Uya kucelwa ukuba lungisa ukungaqondani kunye nolwalamano olusondeleyo kunye nabahlobo bakho. Uya kufuna ukuseka inkululeko yakho kwaye uya kuziva ungcono emva kokuthatha ixesha elithile.
Inyanga epheleleyo iyakunceda Chonga eyona minqweno yakho kunye noloyiko lwakho olunxulumene nabo. Ukuba umntu usebenzisa ububele bakho, kuya kufuneka uzimele.
Ungamtsala njani uLeo Indoda ngeeNgcebiso zethu zokuSebenzisa iiNkwenkwezi
Ngabe uSaturn ubuyela nini kwakhona ngo-2021 kwaye zithini iziphumo?
yenza i-taurus kunye ne-scorpio
Ndiyifumana njani inombolo yam yengelosi
izilwanyana zomoya ngomhla wokuzalwa
Intsingiselo yesigcawu emaphupheni
Intsingiselo yamanani 111
indlela yobomi 29 11